Glass ibhotela churn imbiza
ingilazi candy jar
ingilazi ukudla jar
ingilazi uju jar
ingilazi makhi jar
ingilazi ukhilimu jar
ingilazi Pudding jar
Glass spice imbiza
Ukupheka Amafutha Glass Bottle
Glass Ubisi Bottle
Amafutha omnqumo Glass Bottle
Reagent ingilazi Bottle
Glass ikhandlela Jar
Glass Cup noma mug
Glass Iwayini Bottle
California iwayini ingilazi ibhodlela
Liquor ingilazi ibhodlela
newayini elibomvu ingilazi ibhodlela
skull ikhanda skull ingilazi ibhodlela
Vodka ingilazi ibhodlela
Whisky ingilazi ibhodlela
Iphunga Glass Bottle
Essential ibhodlela uwoyela
Glass elangeni ibhodlela
Perfume ingilazi Bottle
Xuzhou Yanjia Glassware Co., Ltd. kuyinto inkampani ezimbonini kanye ukuhweba zokuhlanganisa ukuthuthukiswa, design, ukukhiqiza, yokuthengisa ukuhweba. Inkampani yethu yasungulwa ngo-July 2009 futhi sinalo 7 neminyango kuhlanganise soMnyango wezangaPhandle ukuhweba, umnyango ukuhweba yasekhaya futhi umnyango zokukhiqiza nokunye. Kunezinhlobo ezingaphezu kuka-50 professional ezobuchwepheshe abasebenzi ukuphathwa futhi umphathi yokuthengisa enkampanini yethu.
Sinikeza imikhiqizo ezingaphezu kuka 2000 izinhlobo ikakhulu zihlanganisa glass amabhodlela, ingilazi izimbiza, ezifana amafutha omnqumo ibhodlela, isitshalo isiko ibhodlela, zonke izinhlobo isiphuzo amabhodlela, iwayini glass amabhodlela, ubisi glass amabhodlela, ikhofi ingilazi isitoreji izimbiza, abanikazi ikhandlela, isitoreji embizeni, amabhodlela cosmetie, ubuso cream embizeni ngoqalo isivalo, futhi zonke izinhlobo glassware, spice kanye pepper grinder etc.Our imikhiqizo lithunyelwa United States, e-Russia, e-Canada i-Australia, eVietnam futhi iyiphi enye amazwe 100 futhi izifunda.
Sinelungelo ukuthekelisa izimpahla kanye esinakho cishe 10 kweminyaka yentuthuko kanye ukukhiqizwa isipiliyoni. Ukunamathela isimiso zebhizinisi izinzuzo mutual, siye saba nedumela elihle phakathi amakhasimende ethu ngoba amasevisi ephelele, imikhiqizo yethu izinga namanani ukuncintisana.
Inkampani yethu usebenzisa eziphambili ukukhiqizwa ubuchwepheshe futhi ijulile ukucutshungulwa ubuchwepheshe kanye esinakho eziphambili ukuhlolwa imishini futhi amathuluzi, okuyinto asihlomise ikhono eqinile ukuthuthukiswa, futhi siye etholwe 7 kazwelonke izitifiketi design patent. Ikhwalithi imikhiqizo ingilazi iye lilawulwa, eye wathandwa kokubili amakhasimende ezifuywayo kanye angaphandle. Ngaphandle kwalokho, sinalo umklamo iqembu lochwepheshe futhi sikwazi ukwakha izinhlobo ezintsha amabhodlela futhi wenze isikhunta entsha kumakhasimende njengoba ngamunye izidingo zabo ngesikhathi esifushane. Siphinde anikele zonke izinhlobo ngezifiso ukucutshungulwa olujulile glass amabhodlela, ezifana frosting, Electroplating, sishaye, decal futhi silkscreen, njll Sinikeza imikhiqizo ezingaphezu kuka 2000 izinhlobo ikakhulu zihlanganisa ingilazi ibhodlela ezifana amafutha omnqumo ibhodlela, isitshalo isiko ibhodlela, zonke izinhlobo isiphuzo amabhodlela, abanikazi ikhandlela, isitoreji uthi lokubeka imbiza, amabhodlela izimonyo zonke izinhlobo izinto glassware eziphathelene experiment chemical efana ingilazi beaker, njll Ngaphezu kwalokho, Sinohlelo inkonzo ephelele futhi singahlinzeka ejenti maphilisi ezifana Motor ezokuthutha, isitimela, ulwandle ezokuthutha kanye air zokuthutha nokunye.
Asikwazi ukuguqula imibono yakho futhi imiqondo ibe imikhiqizo yangempela.
Sine siqu line yethu zokukhiqiza, kanye anganikeza amanani abiza.
Kusukela impahla eluhlaza ekukhiqizeni sokugcina, everystepare kubuyekezwa yizisebenzi yethu ukuze siqiniseke ngoba satification yakho.
Asikwazi ukukhiqiza imikhiqizo esekelwe amakhasimende requirements.Your design and isampuli owamukelwa.
Sizokwenza ahlele imikhiqizo ngendlela enomqondo, ukuqinisekisa ukuthi izimpahla willbe okulungiselelwe kanye ehleliwe.
Yiba esiyingxenye yesiko